Fifandraisana amin'ireo mpisintaka amin'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Zoma, Aogositra 20, 2010 Sabotsy, Janoary 11, 2014 Douglas Karr
Jason Falls an'ny Social Media Explorer dia bandy mahafinaritra ary iray amin'ireo olona tsy ekeko matetika fa hajaiko foana. Jason dia teo am-piandohana - niara-niasa tamin'ny mpanjifa mba hampivelatra ny paikadin'ny media sosialy.
Torohevitra iray izay zaraiko amin'ny rehetra dia ny fomba fiasa Jason momba ny fifandraisany amin'ireo mpanaratsy an-tserasera - henoko izy niresaka momba izany tao amin'ny Blog Indiana tamin'ny 2010.
Fantaro zon'izy ireo hitaraina.
Mialà tsiny, raha ilaina.
milaza, raha ilaina.
hanombana inona no hanampy azy ireo hahatsapa ho tsara kokoa.
Act arak'izany, raha azo atao.
manankina - indraindray ny sento dia manelingelina.
Amin'ny fotoana hamarihanao fa ny fakana an-keriny no làlana mety indrindra, dia hamaritra zavatra mitovy amin'ny anao ny fiarahamonina an-tserasera. Matetika ny mpanaraka anao dia hiaro anao rehefa mitranga izany.
Ny valin'ny toe-javatra ratsy eo amin'ny Internet dia mamaritra matetika ny orinasa iray sy ny hoe ahoana ny fiaraha-miasa amin'izy ireo. Marketing Pilgrim dia manana ohatra mahafinaritra amin'ny fomba TSY mamaly ny tsikera ratsy -tserasera. Ohatra amin'izany ny tompona fivarotana Pizza izay nahazo tombana ratsy tamin'ny…. mendrika ny vakiana!
Tags: manankinamanaikyMihetsika!miala tsinymilazahanombananianjera i Jasonkrizy amin'ny media sosialy
Fampisehoana: fanombohana ny fanatsarana ny motera fikarohana
Aug 23, 2010 amin'ny 9: 09 AM
Famerenana lehibe momba ny tontonana Zoma, Doug.
Tsara vintana aho nipetraka tamin'ny famelabelaran'i Duncan Alney tamin'ny Sabotsy mitondra ny lohateny hoe: Fitantanana ny laza an-tserasera. Na dia tena nampahafantatra aza ny fampahalalana nomen'i Jason, dia tsapako fa tena "natosiky ny fony" ho ahy ny hevitra nataon'i Duncan. Ny tena zava-dehibe kokoa dia ny fanavahana ny maha-ara-drariny ny valin-kafatra ho an'ny mpitaraina amin'ny voalohany, araka ny voalaza hoe: 'Mitaraina ny olona sasany'. Ny hafetsena dia ny hoe rahoviana no hahafantarana *raha* ny valin-teny iray dia azo antoka tahaka ny *ny fomba* hilazana azy.
Miverina amin’ny mangarahara avokoa izany rehetra izany. Satria mitombo haingana sy haingana kokoa ny media sosialy, ny orinasa izay “tsy mahazo” dia sahirana amin'ny fanarahana azy. Ireo izay mampifanaraka no ho tafavoaka velona. Mety hieritreritra toy izao izy ireo: tsy avelanao hitondra fiara tsy miangatra ao ambadiky ny kodiaran'ny fiaran'ny orinasa iray eny amin'ny arabe be olona ny mpiasanao, koa nahoana izy ireo no hamela ny olona hiandraikitra ny ezak'izy ireo amin'ny media sosialy izay manao zavatra mitovy amin'izany? Matetika kokoa noho ny tsy, ireo fomba roa ireo dia miafara amin'ny vokatra mahatsiravina sy ny laza ratsy.
Aug 23, 2010 amin'ny 9: 29 AM
Nitendry teny sasany avy amin'ny lahatsoratra aho tamin'ny teny nindramina tao amin'ny google ary hitako ny lahatsoratra tany am-boalohany ary mbola raikitra ny adihevitra. Misy ireo tia ilay toerana ary misy ireo mankahala azy. Nikatona nandritra ny herintaona mihitsy aza ny trano fisakafoanana noho ny olana ara-pahasalamana ary nisokatra indray, saingy mbola raikitra ny adihevitra. Raha ny trano fisakafoanana ny famerenana ratsy dia mankarary kokoa noho ny famerenana tsara satria tsy misy te handany vola ary misy safidy maro. Lohahevitra mahazatra amin'ny fanehoan-kevitra ratsy rehetra dia ny iray amin'ireo mpiasan'ny trano fisakafoanana, ny tompony mihitsy, ny mpiasa, izay nanao zavatra tsy mendrika. Izany no mahatonga ahy hino fa misy olana amin'ny kolontsaina.
Ity ny lohahevitra momba ny Yelp: http://www.yelp.com/biz/amys-baking-company-scottsdale#hrid:c6GfpA9j5HAVJIbK6D50Vw